Amanqaku ka-langela de la Vieja kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Ángela de la Vieja
U-langela yingcali yohlalutyo lweshishini, amaxabiso kunye nolawulo lweendaba, ekhokela umxholo kuwo onke amajelo kunye nokulawula ubukho kuwo onke amaqonga ezentlalo.
Kutheni le nto onke amaShishini eCommerce efuna isiXhobo seXabiso lamaXabiso?
NgoLwesibini, Matshi 10, 2020 NgoLwesibini, Matshi 10, 2020 Ángela de la Vieja
Sonke siyazi ukuba ukuphumelela kweli xesha litsha lorhwebo lwedijithali kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo, ke ukuphumeza izixhobo ezifanelekileyo kubalulekile. Ixabiso liyaqhubeka ukuba yinto yokujonga imeko xa usenza isigqibo sokuthenga. Omnye wemiceli mingeni ojamelene namashishini eCommerce kule mihla kukuhlengahlengisa amaxabiso abo ukuze ahambelane noko bafuna abathengi babo ngalo lonke ixesha. Oku kwenza isixhobo samaxabiso esiguqukayo esibalulekileyo kwiivenkile ezikwi-Intanethi. Izicwangciso-maxabiso ezinamandla, ukongeza kwi